European Commission inobvumidza Apple kutenga Shazam | IPhone nhau
European Commission inobvumidza Apple kutenga Shazam
Muna Zvita 2017 isu takataura pane inogona kutenga Shazam naApple. Kuwanikwa kweApple kwekambani yakadaro kunoda kupihwa mvumo yekutanga kweEuropean Union.
Shazam ndiyo inozivikanwa inozivikanwa yeBritish rwiyo rwekuziva chikuva. Pasina kuve Apple parizvino, yakatobatanidzwa neApple services, senge Apple Music uye Siri.
Hatizive izvo zvinangwa zvaApple nekutenga uku. Inogona kuchengeta Shazam akadaro, asi shandisa simba rayo rese kugadzirisa Apple Music. Iwe unogona zvakare kuitenga uye kuishandura kuita Apple chigadzirwa, sezvawakaita kare neBeats Music. Kana, pamwe, chingodzivirira makwikwi seSpotify, Google kana Deezer kubva pakuishandisa, sezvo Shazam inokutendera kuti utambe kana kutenga nziyo dzinoonekwa pamapuratifomu akasiyana, seSpotify kana Apple Music.
Uye iyi yekupedzisira poindi ndiyo inoshungurudza zvakanyanya European Commission uye Directorate-General yeKukwikwidza, iyo Iwe unofanirwa kubvumidza iko kutenga sekureba sekusingakuvadze vagari vekuEurope. Mune mamwe mazwi, mukana weApple wekutengeserana haugone kuve nekubvisa sarudzo uye zvakanakira zvatatove nazvo. Ichokwadi zvakare kuti iyo imwecheteyo komisheni yakabvumidza kutengwa kweWhatsApp kubva paFacebook, saka zvese zvinogona kuve.
Iye zvino Reuters inotitaurira kuti chibvumirano chekutenga chave kukwana uye nemvumo izere yeEuropean Commission, maererano nesosi dziri padyo nenyaya iyi. Uye, pachangosvika Gunyana 18, chibvumirano chinogona kuvharwa.
Mutengo unofungidzirwa uchabhadharwa neApple ndeye mazana emamirioni emadhora maererano neTechCrunch, kunyange hazvo paitaurwa zvemadhora trillion (1000 mamirioni).
Apple inotenga yakawanda yemumvuri makambani, asi Kuwanikwa kwaShazam kuri kupa chimwe chinhu chekutaura nezvacho uye chokwadi kukwikwidza, zvisinei nekuti European Commission inofunga zvakadii kuti zvese zvakanaka, zvinoita kunge zvisiri izvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » European Commission inobvumidza Apple kutenga Shazam
Imwezve nyaya yekuti Apple Watch ingadzivirire sei matambudziko ehutano